Ukuqhathaniswa kobucala-nge-Side ye-ACT Imvume ye-Admissions ye-19 iikholeji zase-Colorado
Uwuthathe umThetho, kwaye ubuye uphinde ubalekele amanqaku akho. Ngoku kuthweni? Ukuba unomdla kwenye yezi zikolo ezinkulu eColorado, khangela oku kulandelelanisa ngecala elixhasayo kwicala elingezantsi libonisa umThetho we-ACT izikolo eziphakathi kwama-50% abafundi ababhaliswe. Ukuba amanqaku akho angena ngaphakathi okanye ngaphezulu kwezi zigaba, ujolise ekumiseni.
UMthetho weeKholeji zeColorado UMSEBENZI (ama-50%)
US Air Force Academy 27 33 27 32 27 32
IYunivesithi yobuKristu yaseYorado - - - - - -
Colorado College - - - - - -
Yunivesithi yaseColorado Mesa 18 24 16 23 17 24
IColorado School of Mines 29 32 28 33 28 33
Ikholeji yaseLond Lewis 19 24 19 24 18 24
University of Johnson & Wales ukuvavanywa kwamathuba okuvota
KwiKholeji yaseMetro State 17 23 16 23 16 23
KwiNyuvesi yaseNaropa ukuvavanywa kwamathuba okuvota
IRegis University 22 26 20 26 21 27
IYunivesithi yaseColorado eBoulder 25 30 24 31 24 29
IYunivesithi yaseColorado eColor Springs 20 26 20 26 19 26
IYunivesithi yaseColorado Denver 21 26 20 26 19 26
KwiYunivesithi yaseDenver 26 31 25 32 25 29
KwiYunivesithi yaseMntla Colorado 19 25 19 25 18 25
KwiKholeji yaseNtshona 19 25 18 24 17 24
Imigangatho yokwamkelwa kweekholeji zeminyaka emine eColorado iyahluka kakhulu. Ezinye izikolo ziya kufuna ukubona izikolo ze-ACT eziphezulu ngaphezu komyinge, ngelixa abanye abafuni iimvavanyo zokuvavanya konke. Gcina ukhumbule ukuba ama-25% abafundi ababhalisile baye bahlawula ngaphantsi kwabo babalwe, kwaye khumbula ukuba izikolo ze-ACT ziyingxenye enye yesicelo. Amagosa avunyelwe kwiColorado, ngokukodwa kwiikholeji ze- Colorado nazo zifuna ukufumana irekhodi eliqinileyo lemfundo , isicatshulwa esiphumeleleyo , imisebenzi enentsingiselo yexesha elichanekileyo kunye neencwadi ezilungileyo zinconywa . Ngamanye amaxesha, umfundi ofumana amanqaku aphezulu (kodwa isicelo esingenamandla esithile) akayi kwamkeleka, ngelixa umfundi onamanani aphantsi (kodwa isicelo esomeleleyo) samkelwe.
Ukuba isikolo sivavanya-ukhetho, akudingeki ukuba ungenise amanqaku njengenxalenye yesicelo - ukuba lakho lomeleleyo, nangona kunjalo, yinto efanelekileyo ukuzithoba kuzo.
Ukujonga iiprofayili zezikolo ezidweliswe apha, nqakraza nje kwigama lesikolo kwitshathi elingentla. Kulapho, uya kufumana ulwazi oluthe xaxa malunga nokufakwa kwamanani, iinombolo zobhaliso, iinkcukacha zenkxaso-mali kunye namanye amanqaku ancedo.
'UFur Elise' nguLudwig van Beethoven
Imbali yeMidlalo yeZithuthi
Ukumisa iManor: Indlu eYininzi yeBrithani
I-Legendary Invention yeSilk
I-Adjective Phrase Definition kunye nemizekelo
I-Hypothesis Inkcazo (iNzululwazi)